Fitohizan'ny hafatra : Aiza aza Andriamanitra amin'ity fahoriam=be eto Madagasikara ity kanefa ny fiangonana an'alin-kisa?
endriny - 27/09/2017 06:11
rhaj0 - 27/09/2017 15:26
RAha ny Andriamanitry ny Kristiana anie no ivavahanareo, dia ... Izy angaha nampanantena anao fa TSISY fahoriana ETO AN-TANY?? na ny marimarina koa hoe, Izy angaha nampanantena fa (ho) Hasambarana ny eto an-tany??
Izay tokoany ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny mpandalina. Ny fahasambarana @ finoana sy kolotora isan-karazany, dia mitodika @ fiainana ETO AN-TANY, mety mitodika @ fiaraha-miaina @ manodidina eo (@ Tatsinanana), mety mitodika @ fiainan'ilay tenabe eo (@ Tandrefana).
Fa ny nahavariana dia @ Judeo-Chretien puriste, dia ny fahasambarana dia:
- tao @ Saha Edena
- any @ Fiainana mandrakizay
Fa raha eto an-tany, dia ... toa hoe, ireo pretra BE "voafidy" (na nanendri-tena ho voafidy), ireo ihany no sambatra. Ary matetika azany, rehefa maty izy vao sambatra. Béat.
Sa hoe, aboahy eto ny resa-Baiboly milaza fa ny "hasambarana eto an-tany no nampanantenain'Atra ho an'ny oloNY" ??
resa-Baiboly toko aman'andininy ho'a fa tsy hoe... ny ao @ hiran'i Solo ohatra an...
endriny - 28/09/2017 06:24
Ilay andriamanitry ny Hebreo aloha nampanantena tany tondran-dronono aman-tantely ho an'ny taranak'i Mosesy a. Ilay tany nampanantenaina.
Fa ilay eto Madagasikara toa mampanantena fahoriana sy fijaliana fa any an-danitra hono ny valisoantsika. Ary sarotra ho an'ny mpanankarena ny miditra ny fanjakan'ny lanitra fa moramora kosa ny idiran'ny rameva amin'ny vodifanjaitra.
Kanefa ilay mpitory an'io asa na mahantra ohatran'ny rameva na ingahy mpanana mitaingina 4x4 sy mitilina amin'ny trano be tapitrohatra
lahindroy - 28/09/2017 11:30
salama jiaby isika eto
I pasitera Mailhol dia vao avy niresaka tamin'i Jehovah NIVANTANA (Don-dresaka TV plus farany) ka nanome baiko azy ity farany hitondra an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fifidianana amin'ny 2018 (nomena safidy izy na amin'ny fisian'ny rà mandriaka na ho voafidy amin'ny ara-dalàna).
Ho lany izy satria Jehovah no mandamina ny zava-drehetra ( mety tsy mbola tao anatin'ny drafitra natsangany angambany namonjena ny Malagasy hatramin'izay ka tokony ...ahay mionona isika)
MINOA FOTSINY IHANY fa afaka erintaona dia :
-ho tapitra ny kolikoly
-handroso ny Malagasy
-ho sambatra i Madagasikara
Malagasy aman'etsiny ny manaradia an'i pasitera Mailhol (feno hipoka ny kianjan'Atsojombe fotoana vitsy monja izay) ary mino tanteraka fa Izy no nosafidian'i YWHW hamonjy an'i Madagasikara sy ny Malagasy
RBNIR - 29/09/2017 07:59
Dia aleho indray ary iandrasana raha izany!!!
Izaho manokana aloha dia efa nahita fa tsy avy amin'i Jehovah ny faminanaiana izay ataony satria efa diso ilay tamin'ny 2013....
Hoy mantsy ny tenin'Andriamanitra hoe...« Raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah ny mpaminany, ka tsy efa ny zavatra, na tsy tanteraka, dia teny izay tsy nolazain'i Jehovah izany: tamin'ny fahasahisahiana no nilazan'ny mpaminany izany, koa aza matahotra azy. » (Deotoronomia 18:22)
Raha tena i Jehovah marina no miteny......Tsy maintsy tanteraka......
rhaj0 - 29/09/2017 15:26
RBNIR « Raha miteny amin'ny anaran'i Jehovah ny mpaminany, ka tsy efa ny zavatra, na tsy tanteraka, dia teny izay tsy nolazain'i Jehovah izany: tamin'ny fahasahisahiana no nilazan'ny mpaminany izany, koa aza matahotra azy. » (Deotoronomia 18:22)
Deotoronomia dia boky (nalaina) ao @ Torah fa napetraka ihany koa ao @ Baiboly.
I Mosesy no manao serimoana @ io.
ka izay izany HONO eee.. Rahefa "tsy tanteraka" ny faminaniana, dia mba .. tsy tanteraka izany ee.. dia "aza matahotra" izay vavan'ilay mpaminany tao io.
Fa izany ve milaza ry RBNIR fa SANDOKA ilay mpaminany, ary sandoka hatramin'izay ka mandrakizay?? Izay ve no tian'i MOsesy tenenina??
Miharena - 29/09/2017 21:01
Ny ahy indray hafa mihitsy no fijeriko azy.
Ny olona mivavaka dia manana fiadanam-po sy fiononam-po ary mahazo fitahiana noho izany satria mahita tsara ny lalan-kombany sy ny tandrify azy avy ao anatin'ny lazaina hoe fahantrana.
Ny tena mampahantra anie dia tsy ilay fivavahana fa ilay olona mivari-lavo be dia be tsy mivavaka ny ankamaroany koa e!
gasy1zay - 29/09/2017 22:49
Hoy ny baiboly hoe : Sambatra ny firenena manana an'i Jehovah ho Andriamaniny
Aleo aloha mba hazavaina kely fa rehefa hoe izy no Andriamanitra dia midika izay hoe izy no ambonin'ny fahefana rehetra, ny didiny no arahina ( esorina ny sampy, ny vavaka @ razana, ny tsy fanarahandalana rehetra toy ny kolikoly halatra sns...)
Raha mandinika ny zavamisy marina eto gasikara isika dia mazava be hoe tsy Jehovah no Andriamanitra raha ny manampahefana mbola manao kolikoly, makany @ dadarabe, manatitra sorona any @ sampy, dia toy zany koa ny vahoaka tsy mbola Jesoa Kristy no Tomponao raha mbola miaina anaty ota ianao ary ny nofonao no mitondra ny fiainanao ( fijangajangana, fisotroan-toaka, zava-mahadomelina, fitiavambola, fitiavan-tena ...).
Katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra izay vao ho azonao ny fiadanana, ny harena, ny fahasalamana sns...
hoy ny Tompo hoe : ianareo miasa fatratra sy mavesatra entana, manantona ahy fa izaho hanome anareo fitsaharana.
rhaj0 - 02/10/2017 03:28
gasy1zay Hoy ny baiboly hoe : Sambatra ny firenena manana an'i Jehovah ho Andriamaniny
Aleo jerena ny sitatistika fa tsy hanao boloky izao resaka rehetra ambony latabatra manodidina ny vera izao
Norway is the overall happiest country in the world, even though oil prices have dropped. Close behind are Denmark, Iceland and Switzerland
Dia ndao jerena aiza no be atheist
29% of the Norway stated that "I don't believe there is any sort of spirit, God or life force"
12% of Denmark were "convinced atheists
14% of Iceland were "convinced atheists
12% of Switzerland were "convinced atheists.
Ny tany TSY sambatra indray dia
Chad, Luxembourg, Togo, Benin
Tsy voaisa ny Atheista, afa-tsy...
24% of the Luxembourg stated that "I don't believe there is any sort of spirit, God or life force
OK.. toa tsisy idiran'ny Atheisma izany ny fahasambarana
Sa ndao azany jerena ny fahamarinan'ny Baiboly (-n'i Gasy1zay) ahitana raha izay manana ny Atry ny Kristiana no sambatra
Norway 76.7%, Denmark 79%, Iceland 81.6%, Switzerland 78%
Chad 35%, Luxembourg 72.4%, Togo 29%, Benin 42.8%, Madagascar 41%
Raha ny tany mandroso no jerena dia tsisy idiran'ny Kristianisma koa izany fahasambarana iznay. Sa hilaza i Gasy1zay hoe, ny tsy mampasambatra an'i Chad, dia tsy tonga tany i Leopold II an'i Belgique???
Fa dia samy afaka miteniteny izay tiany teneniny, fa n'engage que celui qui y croit io ry Gasy1zay aaa..
Izaho izao afaka miteny koa hoe:
Maimbo ampy izay firenena manana an'i Emanuel ho Andrianiny.
RBNIR - 02/10/2017 06:51
Ny dikany dia hoe "mpandainga" izy satria nilaza fa naminany tamin'ny Anaran'i Jehovah, nefa tsy tanteraka akory,
Koa dia asakasak'izay hino sy hihaino ireo laingabeny ao rhajo!!!
rhaj0 - 02/10/2017 19:36
RBNIR Ny dikany dia hoe "mpandainga" izy satria nilaza fa naminany tamin'ny Anaran'i Jehovah, nefa tsy tanteraka akory,
Io ve ry RBNIR tsy mba azonao saintsainina hoe,
- tena mba nisy fikasana tsara (bonnes intentions) kosany tao
- dia satria nampianarina ary nanaiky sy "nino" tokoany izy hoe:
--- mbola misy "mpaminany" @ izao taona izao
--- ary ny "faminaniana dia ATAO", araka ny filazan'i Saoly lasa Paoly
--- ary rehefa ATAO comme il faut io, dia i Andrmntra en personne no (mety) "hibitsika" eo
==== ka dia mba nanao ny anao lahy (sy vavy)
==== nefa dia io ny vokany: LAINGABE, hozy i RBNIr izay.
Ka tena mba azo saintsainina ve ho'a hoe, ny vokatry ny "finoany" (faminaniana TSY tanteraka) ihany no vorika teo?? Satria dia tena tao @ "finoana" izy no nanao an'io.
Io sahala @ "mivavaka" ihany eee.... Tena mivavaka am-po/saina/fanahy ny olona, fa ny vokatry ny "finoany" (valim-bavaka TSY tanteraka) ihany no vorika ao
--- mbola misy "m(amp)ivavaka" @ izao taona izao
--- ary ny "vavaka ATAO" dia "fangatahana" (sy "fisaorana" ets...)
izany hoe, ilay "finoana" (@ fo/saina/fanahy madio) tao dia hoe:
1- afaka "maminany" na afaka "mivavaka"
2- ary i Andrmntra no mibitsika aminao "faminaniana" na "valim-bavaka"
Ka aiza ny olana? Eritereto tsara anie ry RBNIR ee..
1- Ilay olona "maminany" na "mivavaka" ve no midegany?
2- sa ilay system mampino fa ny olona dia afaka "maminany" na "mivavaka" no vorika?
3- sa ilay mamaly "faminaniana" na "vavaka" mihintsy no TSY MISY eee???
endriny - 03/10/2017 07:06
Fa ny Kristianina ve tsy mino ny herin'ilay kristy Jesosy mba hiaro azy amin'ny pesta no mameno filaharana an'ity tampin 'orona @ farmasia ity e?
Mba mangataka mpiandry handroaka pesta ange ry zareo raha mety a
RBNIR - 03/10/2017 09:08
Ny tena marina tsy dia problemako loatra ilay izy fa probleman'ireo olona mpanao an'ilay izy sy ny mpanaradia aminy...
« Indro, hoy Jehovah, hasiako ny mpaminany, izay mampiteny ny lelany hoe: Hoy Izy. » (Jeremia 23:31)
« Indro, hasiako izay maminany nofy lainga, hoy Jehovah, ary milaza izany ka mampivily ny oloko amin'ny laingany sy ny fandokafany tena; Nefa Izaho tsy naniraka azy na nandidy azy tsinona, ka dia tsy mahasoa ity firenena ity akory izy, hoy Jehovah. » (Jeremia 23:32)
Ilay olona maminany lainga aloha dia miandry ny valiny amin'Andriamanitra...
Ireo olona voafitany kosa dia io......lasa mivily noho ilay lainga nafafy taminy....dikany ho very miaraka aminy any koa...
rhaj0 - 03/10/2017 14:47
RBNIR Ny tena marina tsy dia problemako loatra ilay izy fa probleman'ireo olona mpanao an'ilay izy sy ny mpanaradia aminy...
Io ho'a mba "faminaniana" no ataon'ilay olona, dia belazao ny @ zava-Hisy ao izy. Dia tsy tanteraka anefa, ary dia LaingaBe hoz'i RBNIR.
Ahoana kosany ho'a ilay rehefa atao parallele @ "mivavaka" na "mampivavaka" ny "maminany".
Inona no maha-samy hafa anao na Hrnrn, "mivavaka" mafy, na "mampivavaka" mafy ny mba hisian'ny "fanasitranana" ohatra.
Io "vavaka" ataonareo, dia manao belazao ny @ zava-Hisy ao ianareo. Dia tsy tanteraka anefa, ary dia ... LaingaBE izany koa, hoz'i RBNIR???
Dia ilay olona voafitakareo @ hoe "vavaka mafy fa hisy fanasitranana mirakla"... nefa io LAINGABE fa tsy tanteraka akoriny... ilay olona mino anareo lasa mivily noho ilay lainga nafafinareo taminy... ohatra izany voan'ny pesta dia mivily tsy mitady fanafody siantifika fa "mivavaka mafy dia mety" hono, hoz'nareo RBNIR & Hrnrn.
Sa TSY mivavaka @ io pesta io ianareo ao ry RBNIR (sy Hrnrn)???
RBNIR - 04/10/2017 07:57
Samihafa ny hoe mivavaka dia tsy tanteraka, sy ny hoe manao fanambarana amin'ny anaran'i Jehovah nefa tsy tanteraka.....
Ny voalohany tsy hoe mandainga, fa ilay faharoa no mandainga satria milaza fa hoe faminaniana avy amin'i Jehovah, nefa tsy avy aminy akory....
P.S : Faminaniana avy amin'i Jehovah = Tonga eo anoloanao i Jehovah dia MIRESAKA dia MANIRAKA mivantana!!!
Tsy izany anefa no nisy fa ity....
RBNIR - 04/10/2017 07:59
Olona mpandoka tena ireny!!! Jehovah tsy naniraka na nandidy azy akory....
Tsy mahasoa ny zavatra teneniny...
endriny - 04/10/2017 15:12
Mba Ashely eto ry RBNIR any order de mission-nao avy @ Jehovah raha mety a. Fa aza dia mandainga loatra fa samy mpanoratra daholo ianareo.
Mbola mitovy foana ny fivarotana lanitra ohatran'ny nataon-dRalouis fahiny. Misy ireo mihevitra fa tompon'ny lakle Ka rehefa mandrotsaka 1/10 na raki-boady na... dia madio afaka miditra izany lanitra izany daholo.
Ny an-dRalouis aza lazainy mihintsy fa mila mandrotsaka vola amin'Atra ny mpino mba handiovana ireo maty mijaly ao @ afo fandiovana, ary ireto mpanjaka nanao adalana dia tokony manome azy ny 75% fanjakany dia Avotra mandrakizay doria amen.
Lava be iny, fa eto Madagasikara dia Kristianina daholo ireo mpanao kolikoly sy dahalo ambony latabatra
RBNIR - 04/10/2017 15:19
Ny baiboly no ordre de mission ry endriny a!
Ampitovio amin'ny baiboly izay lazaiko raha misy mifanohitra amin'ny voasoratra ao dia afaka miteny ianao fa tsy nandray avy taminy aho....
« Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. » (Matio 7:17)
« Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. » (Matio 7:18)
« Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. » (Matio 7:19)
« Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. » (Matio 7:20)
rhaj0 - 04/10/2017 15:38
rhaj0 Io "vavaka" ataonareo, dia manao belazao ny @ zava-Hisy ao ianareo. Dia tsy tanteraka anefa, ary dia ... LaingaBE izany koa, hoz'i RBNIR???
Fa rehefa "mivavaka" na "mampivavaka" angaha moa nareo ry RBNIR tsy manao hoe:
"@ anaran'ny Jesoa Kristy no atao izao vavaka izao" ???
Sa soraty mazava etoana azany ho'a hoe ry RBNIR toatoa ny ahoana ny "vavaka" na "fampivavahana" ataonareo RBNIR sy HRnrn @ izao pesta izao???
1- inona no "angatahanareo"??
2- ahoana no amarananreo izany"fangatahana" izany??
RBNIR - 04/10/2017 15:40
Hafa hoy aho izany mandray hafatra mivantana avy amin'i Jehovah izany...
Tsy afaka hiteny mihitsy aho hoe hoy i Jehovah, raha tsy ny vavany mihitsy no niteny tamiko...